BBC Somali - Warar - Obama iyo Romney oo is jiiray
Obama iyo Romney oo is jiiray
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 4 Oktoobar, 2012, 04:56 GMT 07:56 SGA
Dood kulul ayaa dhex-martay Obama iyo Romney
Waddanka Maraykanka waxaa ka dhacday dood dhexmartay labada murashax ee u tartamaya madaxtinimada dalkaasi.
Madaxweyne Barack Obama iyo Mitt Romney, ayaa isaga hor-yimid doddii ugu horreysey oo ka mid ah saddex kulan oo si fool-ka-fool ay isaga hor imanayaan television-ka.
Labada nin waxaa mid waliba uu soo badhigayaa waxyaabaha uu qaban doono afarta sano ee soo socota haddi uu ku guulaysta doorashada.
Dadka wax indha-indheeya ayaa sheegaya in Madaxweyne Obama uusan u hadlin sidii laga filayay.
Doodda labada nin waxay diiradda saartay dhaqaalaha, canshuurta iyo caafimaadka.
Romney ayaa sheegay in siyaasadda Obama ee ku dhisan dhaqaalaha hoos u daa-dagayo ay dhibaato ku tahay Maraykanka. Obama waxaa uu sheegay in hadii la doorto Romney, uu dhaqaalaha Maraykanka laba-laab hoos u dhici doono, marka la bar-bar-dhigo dhibatadii dhaqaale ee uu sababay madaxweyihii hore George Bush.
Romney ayaa kulankani u adeegsanayay in uu dib u soo noqdo siyaasad ahaan, ka dib markii ay ololahiisa hareeyeen hadallo video ahaa oo uu ku af-lagaadaynayay qeyb ka mid ah cod bixiyayaasha.